सिद्धिचरण श्रेष्ठ : युग परिवर्तनका पक्षपाती - Sankalpa Khabar
सिद्धिचरण श्रेष्ठ : युग परिवर्तनका पक्षपाती
१० जेष्ठ १०:५९
सिद्धिचरण श्रेष्ठ नेपाली साहित्यमा विशेषत खण्डकाव्यकारको रूपमा चिनिन्छन् । उनको जन्म वि.सं. १९६९ जेष्ठ ९ गते शुक्ल पञ्चमीको दिन ओखलढुङ्गामा भएको थियो ।
सिद्धिचरणका बुवा बिष्णुचरण श्रेष्ठ जागिरको क्रममा ओखलढुङ्गा पुगेर त्यहीँ घरबास गरेर बसेका थिए । उनी सातवर्षको उमेरमा काठमाडौँ आई दरवार हाइस्कुलमा आठौ श्रेणीसम्म पढे । त्यसपछि पढाइ छाडी घरमै स्वाध्ययन गरे । नेपालकै तत्कालीन प्रसिद्ध महावीर स्कुलमा शिक्षक समेत बनेर अध्यापन गराए ।
मानवीय संवेदनाका मार्मिक भाव संयोजन गरी अन्याय अत्याचारको बिरूद्धमा सिर्जित उनका कवितामा राष्ट्र, राष्ट्रियताप्रति आस्था, जन्मभूमिको माया र निम्नवर्गप्रति आगाढ स्नेहको भाव अभिव्यक्ति नै उनको प्रमुख विशेषता हो ।
सिद्धिचरणले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासँग सहकार्य गरी स्वच्छन्तावादी – प्रगतिवादी कवितालाई समृद्धि र समुन्नत गर्ने काममा ठूलो योगदान गरे । वि.सं. १९९० सालमा गोरखापत्रमा प्रकाशित भुइँचालो शीर्षकको कविताबाट उनी साहित्यमा लागेका हुन् । मात्रिक छन्दमा तथा मुक्तक छन्दमा लेखिएका कवितामा अशिक्षा, गरिवी, असमानताजस्ता विषयवस्तुलाई समेटेर लेख्थे उनी ।
सिद्धिचरणको वि.सं. २००६ सालको शारदा पत्रिकामा प्रकाशित ‘मेरो प्रतिविम्ब’ शीर्षकको कविता नै पहिलो हो । यस कवितामा २००२ देखि २००६ सालसम्मका कविताहरूले प्रबेश पाएका छन् । उक्त कविता राष्ट्रिय जनजीवनप्रतिको चासो तिब्र रूपमा लेखिएको छ । पाँच–पाँच हरफका चार श्लोकहरूमा संरचित मानवको स्वाभिमानमा आच आएको प्रश्नोत्तर शैलीमा कविता लेखेका छन् । सरल, सरस तथा कोमल भावपूर्ण शब्दावली प्रयोग गरेर उनले रााणाकालमा जनताहरूले जीवन व्यतीत गर्दा भोगेको कष्टलाई मुखरित गरिएको छ ।
मानिस साहित्यमा लाग्नुका आ–आफ्ना कारण हुन्छन् । यद्यपी यसका बारेमा सिद्धिचरणको भनाई यस्तो छ–‘‘आमाहरूले भानुभक्त रामायण र सुब्बा होमनाथको कविता पढेको सुन्दा र साहित्यिक गुरू ऋद्धिबहादुर मल्लसँगै बस्दा साहित्यिक अभिरूचि बढ्दै गयो । ९० सालको भुइँचालोको वीभत्सरूप देखेर कवि भएँ र भूइँचालो भन्ने कविता लेखे त्यही सालमा त्यो कविता गोरखापत्रमा छापियो । यसरी मेरो साहित्यिक जीवन शुरू भयो ।”
जीवनमा एक सीमितता हुन्छ । भलै जीवन एक यात्री पनि । जुन यात्रा स्वतन्त्र हुनु पर्दछ । यात्रा उद्देश्यहीन हुँदैन । यात्राले गन्तव्य चुम्नु पर्दछ ः
आकृति हो तर रूपबिहिन,
भाषा हो तर भावविहिन
चारैतिरको बन्द विचार
यो मेरो प्रतिविम्व हिँडेको ।
राणाकालीन समयमा मान्छेको स्थान पशु सरह नै थियो । विवेकहिनता, शून्यताले प्रश्रय पाएको छ । उनले नेपाली समाज, आर्थिक र राजनैतिक विषयता, विसङ्गति र विकृतिप्रति आव्रmोश कवितामा पोखेका छन् । प्रश्नोत्तर ढाचाँमा लेखिएको कविताले आम नागरिकले स्वतन्त्रता नपाएकोले सिङ्गो समाज र नागरिकलाई आफ्नै प्रतिविम्व बनाएर उनले कवितामा भाव व्यक्त गरेका छन् । कविताको मूल सन्देश नै मानवीय अस्तित्वको खोजी हो ।
क्यै हारे झै क्यै बिर्से झै,
को त्यो पथमा आइरहेको ?
कुक्कुर जस्तै लुरूलुरू हिड्दैं
दर्वलताले पीर निखन्दै,
सिद्धिचरण लेखनीको अलावा समाजसेवा र राजनीतिमा समेत सक्रिय थिए । वि.सं. १९९६ तिर राजनीतिमा बढी नै सक्रिय भएको देखिन्छ । त्यस ताक बिद्रोह र क्रान्तिकारी कविता लेखे । वि.सं. २००७ सालदेखि लेखनमा कम राजनीति र समाजसेवा पूर्णरूपमा लागे । तसर्थ, कविता छायाँमा परेकोले अपेक्षित लेखन कम भए तापनि गुणस्तरीयता भने कमी भएन ।
वि.सं. १९९७ सालको शहीद काण्डपछि बिद्रोह र क्रान्तिकारी कविका रूपमा देखा परेका सिद्धिचरणले राणाशासन कालमा राणातन्त्रले गरेको अन्याय , अत्याचार, दमन र शोषणको विरूद्धमा कलम चलाएकोले लामो समयसम्म बन्दी भएर बस्नु प¥यो ।
प्रकृति र मानवीय गहिरो सम्बन्ध देखाई कविता कोर्न खप्पिस सिद्धिचरणले लेखेको ‘मेरो पियारो ओखलढृुङ्गा’ बाट प्रकृतिप्रेमी कविको रूपमा बहुचर्चित भए ।
उक्त कविता १९९२ मा शारदा पत्रिकामा छापिएको थियो । यस कवितामा पाँच पाँच पङ्क्तिको एक श्लोक भएको र जम्मा आठ श्लोकमा टुङ्गिएको छ । प्रत्येक श्लोकको अन्त्यमा मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा वाक्यलाई देखाएको छ ।
आफू जन्मी, हुर्की खेलेको ठाउँ सबैलाई प्यारो नै लाग्छ । कविलाई पनि ओखलढुङ्गाको प्राकृतिक सुन्दरताले मन तानेको हुन सक्छ । कविले ओखलढुङ्गा छोड्दाको सस्मरण वा सम्झनामा भावना व्यक्त गरेका छन् ः
तिम्रौ सुन्दर हरियालीमा
हास्यो खेल्यो वनकुञ्ज घुम्यो
भाग्यको लहरमा लहरी–लहरी
पुगेँ यस मरूस्थलमा कसरी
तर खेद छैन तिम्रै आकृती
लेखिएको छ यो ह्रदयभरी
मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा !
राणाकालीन राज्य व्यवस्थामा निर्धक्कसँग कविता लेख्न र वाचन गर्ने समय थिएन । आफू राणा शासनका एक कर्मचारी भए तापनि आट गरेर लेखे ः
खोलानाला जगको चाला
बोल्छु म जो डरको भाषा
रोक्छन् भन्दैंमा वैभवको पथ
के म न लेखु अब कविता ?
नेपाली साहित्यको फाँटमा युगकविका रूपमा प्रसिद्धि पाएका उनका कवितातर्फ मेरो प्रतिविम्व (२०२१), कोपिला (२०२१), कुहिरो र घाम (२०४५), सिद्धिचरणका प्रतिनिधी कविता (२०४५), तिरमिर तारा (२०४६) र बाचिरहेको आवाज (२०४६) जस्ता कृतिको रूपमा प्रकाशित छन् ।
त्यस्तै खण्डकाव्यतर्फ उर्वशी (२०१७), ज्यानमारा शैल (२०२३), मङ्गलमान (२०४९) र अाँसु(२०५०) प्रकाशित छन् । यस बाहेक उनले नेवारी भाषामा सीस्वाँ, फूस्वाँ र सिद्धिचरणया ग्वय्स्वाँँ (२०४७), लुभुनी (२०४७), तृष्णा (२०४७), बाखँमुना (कथासङ्ग्रह), नारी ह्रदय (कथा र नाटक (२०४९), सिद्धिचरणया निबन्ध (२०५०), , धमा (भूमिकासङ्ग्रह) जस्ता पुस्तकहरू प्रकाशित छन् । अझै पनि उहाँका केही अप्रकाशित पाण्डुलिप रहेका छन् । उनका कृति र विभिन्न पत्रपत्रिकामा जम्मा जम्मी ५०० वटा जति कविता छापिएका छन् ।
सिद्धिचरणले आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न जिम्मेवारी समालेका थिए । तीजस्तै ः शारदा पत्रिकाका सम्पादक (१९९१), गोरखापत्रका सम्पादक (२००५) , कविता पत्रिकाका सम्पादक (२०१२), रोयल नेपाल एकेडेमी सदस्य (२०१४) आदि ।
नेपाली समालोचकहरूले सिद्धिचरण श्रेष्ठको लेखनीको विषयलाई बढी चर्चामा ल्याए । उनी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्दा स्तरीय कविको रूपमा दर्ज भएको कुरा समालोचकहरूको लेखनीको कथन थियो । जे जस्तो भए तापनि उनले पद्य, गद्य, लोक र गीतिलय गरी विभिन्न लयमा कविताहरू लेखे । त्यसैको परिणाम स्वरूप उहाँ विभिन्न पदक र पुरस्कारबाट सम्मानित हुनु भयो । जस्तै ः त्रिभुवन पुरस्कार (२०१७), पृथ्वीप्रज्ञा पुरस्कार (२०४५) , भुकम्प तक्मा (१९९०), रत्नश्री सुवर्ण पदक (२०३१), बेदनिधी पुरस्कार (२०४६), गोरखा दक्षिण बाहु, त्रिशक्ति पट्ट र श्रीरामपट्ट ।
वि.सं.१९९७ सालमा राणाको निरङ्कुशता , बिरोधी र आत्मा समर्पण नगरी तातोगोली खाने र फासीमा झुण्डन तयार भएका शहीदको बलिदानीले चेतनशील नेपाली युवापुस्तामा बिद्रोह मन सलबलाउन थालिसकेको थियो ।
उनले कविता लेख्ने क्रममा वर्षा शीर्षकको कविता लेखे । उक्त कवितामा क्रान्ति गरेपछि मात्र शान्ति आउने भाव पोखे ः
हुङ्कार्छु खूब रिसले जगलाई हाँकी
मास्दै सबै अशुभ वस्तु कुनै नराखी
के हुन्छ शान्ति नभईकन घोर क्रान्ति
त्यो शान्ति स्वच्छ नभइकन हुन्छ भ्रान्ति
त्यसै समयमा राणा शासकले सिद्धिचरणलाई समाती बन्दी बनाए । उनले राणा समक्ष आत्मा समर्पण नगरेकाले १८ वर्षसम्म बन्दी जीवन बिताउन बाध्य भए । बन्दी जीवनमा राणातन्त्रको विरोधमा उर्वशी खण्डकाव्य लेखे । यस खण्डकाव्य १९९७ बाट सुरू गरी २००२ सालमा पूरा गरे । उनलाई समात्दा उनको घरमा खानतालासी समेत गरियो । उनले लेखेका पाण्डुलिपी धेरै जफत गरियो ।
उर्वशी खण्डकाव्य प्रस्तावना , आख्यान र उपसंहार गरी तीन खण्डमा विभाजित छन् । प्रस्तावना खण्डमा ४८, आख्यान खण्डमा ८५५ र उपसंहार खण्डमा ६४ पृष्ठ गरी जम्मा ९६७ पृष्ठ रहेको छ । स्वर्गलोकमा दानवहरूले देवगणहरूलाई हेप्ने, पेल्ने र उत्पाद मचाई बस्नै नदिएपछि अर्जुनसँग सहयोग मागिएको र अर्जुन स्वर्गलोक गई दानवहरूको परास्त गरी खुशी ल्याई विजयी उत्सव मनाई अर्जुनलाई भब्य स्वागत गरी मनाएको चर्चा गरिएको छ ।
राणा शासनको ताण्डव नृत्यसँग तुलना गरेर अर्जुनलाई अग्रभागमा उभ्याई यस काव्यको प्रारम्भ गरेका हुन् । महाभारतमा पाइने पौराणिक अवस्थाको चित्रण गरी राणाको विरूद्धमा कवि आफै अर्जुन बनेका छन्–उर्वशीभित्र ।
निशिदिन मेरो प्रश्विास बढी
खोजेको बस्तु तिमी नै
पालन गर या मार मलाई
मेरा मालिक तिमी नै ।
सिद्धिचरणले बन्दी जीवन बिताउँदाको बीचमा पिताको मृत्यु भएको थियो । आफ्नो पिताको मृत्युको खबर सुनेर उनी मुर्छित भए । चारदिवार भित्रबाटै उनले आफ्नो मृतक पिताको तर्पण कविताको मार्फत यसरी दिएका थिए ः
शोषकहरूको यस्तै चड्का,
अत्याचारी लात र धड्का
पाई बाको प्रिय छोरो,
बाचिरहोस् अझ बाचिरहोस् ।
उनले देशभक्तिको कविता पनि बिजोडले लेखेका छन् । नेपाली भनेका अर्काको पीडामाथि मल्हम लगाउन पछि नपर्ने र आपूmमाथि आइलाग्ने प्रति जाइलाग्न पनि पछि नपर्ने भावको अभिव्यक्ति ः
बैरी नै होस् तर पनि म छू दीनमाथि दयालु
तातो रातो रगत रिपुको प्यूँन हर्दम तयार
मेरो यै नै प्रिय छ खुकुरी हेर भै होसियार ।
नेपाली साहित्यमा प्रतीकका रूपमा खुकुरीलाई लिइन्छ । खुकुरीकै भरमा गोरखालीले वीरता प्रस्तुत गरे । विभिन्न समयमा घटेका घटनाको बेलीबिस्तार कवितामा गरिदै आएका छन् । त्यसैले खुकुरीलाई राष्ट्रिय हतियार मानिदै आएको छ । कवि सिद्धिचरणले पनि ‘परिचय’ कवितामा खुकुरीको प्रंशसा गर्न भ्याएका छन् । खुकुरीले नै अन्याय अत्याचारको अन्त गरिन्छ ।
बैरी नै होस् तर छु बहुतै दीनमाथि दयालु
तातो रातो रगत रिपुको प्यून हर्दम् तयार
मेरो मेरो प्रिय खुकुरी यो हेर भै होशियार
शिक्षा मेरो जगतभरको गर्नु रक्षासदैव
दीक्षा यै हो परहित गँरू आखिरी श्वाससम्म
ज्वाला दन्कोस् दनदन कहीँ, मृत्यू आई फुकेको
अत्यचारी यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको
यिनले आफ्नो जीवनकालमा युरोप, सोभियत संघ, उत्तर कोरिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, फिनल्याण जस्ता देशहरूको भ्रमण समेत गरे ।
जीवनको उत्तरार्धतिरका कवितामा अध्यात्मिकताप्रतिको आकर्षण अभिव्यञ्जित देखिएका युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको मृत्युवरण वि.सं. २०४९ साल जेष्ठ २२ गते काठमाडौँमा भयो ।
अन्तमा, कविता लेखेकै भरमा राणाहरूले उनलाई १८ वर्षसम्म कारागारको सजाए दिए तसर्थ आम नागरिकले उनलाई युगकविको उपाधी दिए । उनको भौतिक शरीर नरहे तापनि उनीद्वारा लेखिएका पुस्तक जीवत छन् । तमाम नागरिकलाई नैतिकवान बन्न र सम्मुनत समाज निर्माणका लागि ती कृतिहरू सहयोग सिद्ध हुनेनै छन् ।